Chekutanga hafu yegore bullish mumusika wekutengesa | Ehupfumi Zvemari
Chekutanga hafu yegore bullish mumusika wekutengesa
Vashoma varimi vanogona kufunga kuti hafu yekutanga yegore yaizove inowedzera mumisika yepasi rose yemari. Asi chokwadi ndechekuti kubva pamazuva ekutanga aNdira kutenga zvinzvimbo ivo vari kuzvimanikidza nekumwe kujeka kune vatengesi. Iko kurasika kukuru kwechinhu chimwe ichi kwakange kuri kana kuve varimari vari kunze kwemisika yemari. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti zvinogona kunonoka kuvhura nzvimbo kuti kuchengetedza kwako kubatsire.
Chimwe chezvinhu zvinomuka panguva ino ndechekuti izvi zvinokwira mumisika yemasheya ishanduko here kana kuti zvinopesana rebound semhedzisiro yekudonha kwakasimba kwakagadzirwa mukupera kwegore rapfuura. Iko kusingakanganike kuti mushure mevakawanda rally yakamirirwa kwenguva refu yezororo reKisimusi haina kuitika. Chokwadi chekuti hapana mubvunzo kuti ivo vakakwanisa kuvhundutsa chikamu chakanaka chevashambadzi vadiki nepakati. Uye ikozvino ivo vari kufunga kuti vadzokere kumisika yemari zvakare.
Kune rimwe divi, imwe yematambudziko iyo savers inofunga ndeyekuti kuwedzera uku kuri kuitika parizvino mumisika yemakambani kuchaenda kupi. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe zvakare kubva kunongedzo yezvakakosha zvemusika wemasheya. Nekuti zvazviri, zvese zvinoita sekunge makiyi ekumisikidza ichi chakakosha chikonzero ndechekuti bhenji rekuyera equity inogona kupfuura rutsigiro rwakakosha rwuri 9600 poindi nhanho.
1 Yakanaka semester kune varimi
2 Masoko haana kuregererwa kubva mukusagadzikana
3 Iko kiyi iri mune mazana mapfumbamwe emazana mapfumbamwe
4 Kuremerwa nebhengi chikamu
5 Maitiro ane akachinjika mitengo
6 Noupenyu hushoma kupfuura bhegi
Yakanaka semester kune varimi
Chero nzira, pane chinhu chimwe chechokwadi uye kuti mwedzi iyi iri kubatsira kwazvo kune vese vadiki nepakati varimi. Mupfungwa iyi, haigone kukanganwika kuti mwedzi waNdira hauna kuwedzera zvakanyanya muUnited States kwemakore makumi matatu uye ichi chikonzero chekupemberera mumisika yemari. Muchikamu chinokonzerwa nesarudzo yeiyo Federal Reserve yeUnited States nekugadzirisa zvinangwa zvayo mukushandiswa kwekukwira kwezvibereko zvemari. Icho chokwadi chakakurudzira varimi kuti vapinde zvakare mumisika yezvemari.
Kune rimwe divi, chokwadi chekuti kukosha kwezvikamu kwainakidza kuvhura zvinzvimbo pamusika wemasheya kwakabatawo basa rakakosha kwazvo. Hazvishamise kuti, mune mamwe emakesi ane kukosha kuri pachena kushaya huremu uye nekudaro vane yakakosha kwazvo yekuongorora mikana. Mune mamwe emakesi ari pamusoro pe20% uye izvo zvinogona kuve chinhu chedu marongero ekudyara. Nekuti ivo vacharamba vaine nzira yekumusoro kwemwedzi mishoma inotevera kana mune yakaipisisa nzira yekuchinjisa mari kusvika kupera kwegore.
Masoko haana kuregererwa kubva mukusagadzikana
Chimwe chinhu chatisingakwanise kukanganwa pakutanga kwegore ndechekuti chiitiko chiri pachena hachisi kugadzirwa. Kana zvisiri, pane kudaro, izere ne zvipingamupinyi munzira uye uko kusagadzikana ndechimwe chezvinhu zvikuru zvinozivikanwa. Nekukwira kwakanyanya uye munguva pfupi neiyo inverse kufamba iyo inodyara kusahadzika kune vadiki nepakati varimi. Hazvishamise kuti ivo havazive zvekutarisira zvichibva pakuuya kwekufamba kwakashata mumisika yemari.
Ichi chinhu chinoramba chiri mubatsiri akaipisisa anowanikwa nevashambadziri panguva ino, sezvo paine kana isiri tsika yakatsanangurwa mukati yepakati kana yakareba. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero zvikuru nei huwandu hwekutora iri imwe yeasina kusimba mumakore apfuura. Chinhu chinogona kudzikisira kubva kuongororo irikuitika muzvivigiro zvinoita mari inoshanduka yenyika yedu. Kusiyana nezvakaitika kumusika wemasheya mumakore apfuura, apo ichokwadi kuti huwandu hwezvibvumirano hwaive hwakakwira zvakanyanya. Kunyanya, nemitengo inomiririra yepamusika wemusika weSpanish, senge iwo anomiririrwa ne machipisi ebhuruu: Endesa, Santander, BBVA kana Iberdrola, pakati pezvimwe zvakakosha.
Iko kiyi iri mune mazana mapfumbamwe emazana mapfumbamwe
Hapana mubvunzo kuti iyi nhanho ndiyo iyo ichaisa maitiro (bearish kana bullish) yezvikwereti kwemwedzi mishoma inotevera. Iyo iri padyo padyo nenzvimbo dzazvino asi mune chero mamiriro ezvinhu ichave inosungirwa kuipfuudza nekumwe kukwana. Chero zvazvingaitika, zvinoita kunge zvisiri nyore panguva ino yekubatana iyo hupfumi hwese huri kusimukira. Hazvifanirwe kukanganikwa kuti nyika yakakosha seItari parizvino iri mumamiriro ekushomeka kwehunyanzvi.
Kune rimwe divi, zvinodawo kuti uongorore kubva panguva dzino kuti iyo mari yemitemoKune rimwe divi reAtlantic kana rimwe racho, ichaita basa rakakosha kwazvo kuti misika yemari inogona kukwira kana kudzika kubva zvino zvichienda mberi. Uye yeavo avo vashoma uye vepakati varimari vanofanirwa kunyatsoteerera kuti vazive chiri chisarudzo chakanakisa chavangaitise kana vachida kubudirira kuita mari yavo mashandiro mumisika yemari. Icho chinangwa chako chikuru shure kwezvose. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi kunogona kumaka misika yezvemari.
Kuremerwa nebhengi chikamu
Iyo Ibex 35 mukati mesvondo rapfuura yarasikirwa neimwe yemabhero ayo apo donha 1,81%, kunyange hazvo zvichipesana chinhu chakakosha ndechekuti chakakwanisa kuchengetedza mwero wakakosha wemapoinzi mazana mapfumbamwe. Iko iko kwakanyanya kukosha iko kwave kusashanda zvakanaka kwemabhanga emunyika mushure mezvakapihwa nechero chikamu Zvekuti nenzira iyi, rwonzi rurefu rwemavhiki evhiki rwunovhara kune kumusoro rwakatyoka. Muchokwadi, uku ndiko kuderera kwekutanga mune seti yezvikamu zvishanu kubvira pakaitika kupera kwa9.000.
Iko kufamba mumisika yemari kunogona kunzwisiswa sechiratidzo chakajeka nezve kupera kwe isingatarisirwi nzombe rally kuti mwedzi wekutanga wegore watiunzira. Asi kune rimwe divi, zvinogona zvakare kumira kuti utore simba rakawanda uye kuenderera nekukwira mumisika yemari kubva zvino zvichienda mberi. Iko pasina mubvunzo imwe yekiyi ichave mune yekuti iwo mazinga erutsigiro ayo Spanish musika wemasheya ane panguva ino anokudzwa. Kunge masheya anogona kuve echinhu chedu marongero ekudyara.
Maitiro ane akachinjika mitengo
Neiyi nzira, imwe yenhau dzakatanhamara muvhiki rapfuura iri ndeyekuti muchokwadi bhangi iri kusangana nemazuva asina kunaka zvakare. Kuunganidza nehukuru hwakasiyana zvinhu zvakasiyana, senge kudzikira kwehupfumi, kubviswa kwehuwandu hwechikwereti kunokwira kana purofiti yakaderera iri kuwana mamwe mabhangi. Kunyangwe pane zvinopesana, chikamu chemagetsi chakagadzirwa mu inzvimbo yekudyara chechikamu chakanaka chevadiki nepakati saver. Iko vazhinji vevamiriri vayo vari mune yemahara kusimuka mamiriro ayo anonyanya kufarira zvido zvevashandisi vemasheya. Hazvishamisi kuti ivo havana vanopikisa pamberi.
Kune rimwe divi, zvinodawo kuti usanyanya kukoshesa chokwadi chekuti kune akati wandei emakambani akanyorwa ane mitengo inokwikwidza kwazvo kuita kusarudza kwekutenga. Mupfungwa iyi, haigone kukanganikwa kuti mimwe tsika ine zvikwereti kusvika ku30% nezve yako yakatarwa mutengo. Chinhu chisiri kuenda chisingazivikanwe nechikamu chakakura chevamiriri vezvemari uye izvo zvinogona kutungamira mukuwedzera kuwedzera mumazuva anotevera kana mavhiki. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uko kunogona kuyera kukosheswa kwaro kwakatevera mumisika yemari.
Noupenyu hushoma kupfuura bhegi
Zvese izvi mune yakajairika mari yekudyara iyo isina kunyatsotsanangurwa. Kupi, isu tinofanirwa kusimbisa kuti iyo ChiSpanish njodzi yepamusoro Yadonhedza mazuva ano kusvika pahwaro hwehwaro hwe106,0, nepo goho rinodikanwa remakore gumi emabhondi eSpain achikwira kusvika pamatanho e10%. Kunyange zvakadaro, isu hatigone kukanganwa kuti misika yemari ndiyo yega inogona kupa kudzoka zvinoenderana nezvinotarisirwa nevatengesi zvachose. Sezvo zvigadzirwa zvichibva pamari yakamisikidzwa hazvigone kuburitsa mubairo unogamuchirwa wezvavanoda kusevha.
Nemamiriro ezvinhu aya ekutsvaga kwekudyara, iyo musika wekutengesa ndiyo yega sarudzo inogona kubatsira panguva ino. Kunyangwe zvine musoro nenjodzi dzinosanganisirwa nerudzi urwu rwekushanda uye ndicho chipingamupinyi chikuru chekuti vhoriyamu yechibvumirano iwedzere mumazuva anotevera kana vhiki. Kunze kwezvikamu zvakagoverwa nemamwe masheya uye ayo anodzoka pane yakapihwa mari anogona kusvika kusvika ku8%. Yakakwirira kupfuura iyo inopihwa nezvimwe zvigadzirwa zvebhangi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Chekutanga hafu yegore bullish mumusika wekutengesa
Mutemo wedunhu unoranga makambani emagetsi pamusika wemasheya
ECB ichaisa nhanho kumisika yeEuropean stock mu2019